Antispam - uncedo kuba besebenza XMailer i-3.0
Thina highly recommend ku mfundisi ukusebenzisa esi sixhobo, njengoko kuya kuvumela ukuba thumela i-imeyili Yakho kakhulu esebenzayo yayo sebenzisa ivumela flexible uqwalaselo lonikezelo Lwakho.
Quka septemba ka-iileta kwi-Latin analogues - jikelele septemba ka-abasebenzi nge-Latin nezinto ezifana nemali, umz. "A"->"A" okanye "O"->"O"
Ukuba transliterate umbhalo - septemba ye-Isicyrillic kwi-Latin counterparts, umzekelo "ukutshintshwa symbols" -> "zamena simvolov"
Sinonimizirovat umbhalo - ilizwi substitution izithetha ntonye in random order
Unxulumano ukunganikeli ukususela lokuposa - Inkqubo ngokuzenzekelayo faka idilesi ye-imeyile umthumeli kulo mhlaba. I-lomamkeli unako rhoxa ngokunqakraza efanayo iqhosha kwibhokisi yakho yangaphakathi. Exhaswa ezininzi e-mail iinkonzo
isXMailruMsgtype i-rhoxa unxulumaniso mail.ru
Unikezelo-Id - elinye inani umsebenzisi ye-imeyili, ikakhulu ukuya kuqokelela iinkwenkwezi ezifana postmaster ye-imeyili postofis ukusuka Yandex
Ukubaluleka iileta (XPriority) - misela ukubaluleka le leta kuxhaswa ngamandla ezininzi i-imeyili abaxhasi
- ID-software (XMailer) ingaba eyodwa isicelo i-ID, kusetyenziswa kuba eyodwa luhlu iqulethe uluhlu lwakho uza kuba injected in random order
Ukuhanjiswa idilesi ifunda (XConfirmReadingTo) - Faka idilesi kweenkonzo iingxelo ukufunda receipts ukusuka kuluhlu Lwakho
Idilesi impazamo (XErrorsTo) - Khankanya idilesi ze bug thumela i-imeyile imiyalezo esuka Yakho lokuposa
Ukutshintsha igama lefayile ukutshintsha igama lefayili umfanekiso vlozhenii kwaye umbhalo ileta iya kuba generated elinye umsebenzi
Ukutshintsha ifomati ukwazi ukutshintsha ubume umfanekiso yayo, ulwandiso kwi-a random order, umzekelo jpeg->png
Yongeza lwezempilo - idibanisa lwezempilo, ukuba umfanekiso lwezempilo ubunzima-mthamo ngu elikhankanyiweyo njengokuba ipesenti
Jikelezisa phezulu - rotates umfanekiso ngaphakathi iqondo ixabiso, ixabiso ungakhankanya
Ukwenza inkcazelo imifanekiso ngu ukujikelezisa alt uphawu kwi-HTML-code of iileta
Umboniso-kwi-HTML - unxantathu umfanekiso ngqo kwi-ikhowudi ye html kwi-base64 ifomati
Sika umfanekiso - yahlula umfanekiso kwi-amaqhekeza aye ngokunxulumene elikhankanyiweyo parameters
Tshintsha - tshintsha ubungakanani umfanekiso kwisithuba esichaziweyo parameters
Umzekelo - ijonge umfanekiso nge-algorithms eyodwa
Ukuguqula amagama iqhotyoshelwe iifayile - amagama iqhotyoshelwe iifayile iya kuba generated ngokuzenzekelayo
Kuvimba iqhotyoshelwe iifayile accidentally - accidentally sendawo yokugcina ehamba nale leta iifayili
Ukutshintsha igama uvimba ngexesha yogcino i indawo ekuyo ifayile, tshintsha igama lefayile ukuba jikelele iimpawu
Qaphela: sendawo yokugcina ehamba nale leta iifayile kwi-a random order, kwaye ingabi kwi osisigxina qho waba uphunyezwe ngenxa yezi zizathu zilandelayo: ukuba unqwenela thumela archived abathathi nxaxheba, unga sebenzisa iinkqubo archivers ukuze kwenziwe lo msebenzi uninzi ngokufanelekileyo kwaye phantsi kwayo sharpened.
Ukubuyisela amakhonkco ukusebenzisa substitution ezinxulumeneyo. Funda ngakumbi apha
Sicebisa ukuba usebenzise ithumela indlela nge ummeli xa ileta ubungakanani ayikho ngaphezu kwe-100 KB.
Musa ukusebenzisa ummeli Ukusebenzisa imiceli-ip ye-umthumeli
Sebenzisa esebenza njengomqobo se - Sebenzisa ummeli umncedisi kwaye imiceli-ip ye-umthumeli izixhobo zokupeyinta phakathi
Kuphela umntu onegunya lokusebenzela omnye sebenzisa kuba ithumela kuphela nge-i-intermediate esebenza njengomqobo
Eli candelo ikunceda ukuba fihla yakho yokwenene ip ukusuka ithumela kwaye fumana i-imeyili umncedisi ngokuthumela imiyalezo nge-intermediate esebenza njengomqobo se-abancedisi. Kwi-XMailer i-3.0 izixhobo i-indlela thumela nge Socks5. Uyakwazi ukulayisha ezansti uluhlu lwakho amagunya, ufihlo kwaye yandisa yethu esebenza njengomqobo se-uluhlu, kodwa oko ufuna khangela kwindlela yokusebenza njengoko ipesenti kuphila amagunya, ufihlo ukusuka qala uluhlu ngu ~10%. Uluhlu ngu constantly ekubeni igqityiwe, kodwa ufuna inkqubo esisinyanzelo le ngxelo.